उर्जामन्त्रीका पिए केपी ओलीभन्दा पावरफुल, दुई करोडको गाडिमा सरर…..(फोटोसहित) – ZoomNP
उर्जामन्त्रीका पिए केपी ओलीभन्दा पावरफुल, दुई करोडको गाडिमा सरर…..(फोटोसहित) प्रकाशित मिति: बुधवार, मंसिर ०१, २०७३ समय - १६:४०:५८ काठमाडौं । जनताको सामु सस्तो लोकप्रियता कमाउन बाहिर एक थोक बोल्ने र भित्र अर्को राजनीतिकर्मीहरुको चरित्र नै हो । उनीहरुले राज्यको सम्पत्ति कसरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न उर्जा मन्त्रालय हेरे पुग्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ उर्जामन्त्री बनेपछि यो प्रवृत्ति अझ मौलाएर गएको छ । मन्त्री बनेका सुरुका दिनमा महशुस नतिर्ने केही ग्राहकको लाइन काटेर लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रयासमा लागेको प्रभाकर पछिल्लो समयकमा एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले महंगा गाडी स्वयम मन्त्री प्रभारकदेखि र राज्यमन्त्रीलाई मात्रै होइन मन्त्रीका निजी सचिवलाई समेत उपलब्ध गराएको छ । गरिव जनताको मुक्तिको लागि भन्दै १० वर्षसम्म जनयुद्ध लडेर आएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरु कति सौखिन बन्दैछन् भन्ने कुरा उनीहरुले चढ्ने महंगा गाडीले प्रष्ट पार्छ ।
आफुलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेबापत विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भएभरका महंगा गाडी मन्त्री प्रभाकरको आदेशअनुसार उपलब्ध गराएको प्रमाण फेला परेको छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि, उर्जामन्त्री र उर्जाराज्यमन्त्रीबाटै विगतमा प्राधिकरणको गाडि दुरुपयोग हुँदा चर्को आलोचना भएकोले अहिले मन्त्रीका निजी सचिवले समेत दुई करोड रुपियाँ मूल्यको प्राधिकरणको गाडि दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।
आखिरी निजी सचिवसमेतलाई किन किन चाहियो त्यति महंगो गाडी ?’ उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘यो त राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हो ।’
उर्जामन्त्रीका निजी सचिव हुन् बसन्त शर्मा । उनी चढने टोयोटाको बा ३ च ४०५२ नम्बरको ल्याण्डक्रुजर गाडीको मूल्य करिव दुई करोड रुपियाँ पर्छ । उनले चढ्ने सो गाडी प्राधिकरणको हो ।
उर्जामन्त्री प्रभाकर र राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगवत बिन ‘निसाद’ पनि टोयटाको ल्याण्ड क्रुजर प्राडो चढ्छन् । मन्त्री शर्माले प्रसारणलाइन आयोजना भरतपुर–हेटौंडाका लागि खरिद गरिएको बा २ झ ५७९३ नम्बरको गाडी हो । सो गाडी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि प्राधिकरणसँग मागेका थिए ।
तर, तत्कालीन प्राधिकरण नेतृत्वले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्षलाई गाडि दुरुपयोग गर्न रोकेका प्राधिकरणका युनियनहरु मन्त्रीका पिएले नै दुई करोडको गाडि दुरुपयोग गरिरहँदा भने अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।
त्यसैगरी मन्त्री प्रभाकरले प्राधिकरणकै १३ च ५७९२ र १००९ नम्बरको ल्याण्डक्रुजर गाडी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् । उर्जाराज्यमन्त्री निसादले पनि प्राधिकरणकै बा १ झ १००९ नम्बरको ल्याण्डक्रुजर प्राडो चढ्छन् भने अर्को कटैया कुसाहा प्रसारणलाइन आयोजनाको गाडि पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
उर्जा मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई गृह मन्त्रालयले मन्त्रीको नम्बरप्लेट भएका गाडी उपलब्ध गराउँछ । उनीहरुसँग गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको कालो कार पनि नभएको होइन । तर, उर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीले प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको नम्बरप्लेट हालेर चलाउँदै आएका छन् । कानूनीरुपमा त्यसरी रातो नम्बरप्लेट भएको गाडीमा मन्त्रीको नम्बरप्लेट राखेर चलाउन पाइँदैन । मन्त्रीहरुले नै कानूनको उल्लंघन गर्दै आए पनि कारवाही गर्ने निकाय नहुँदा प्राधिकरणको सम्पत्ति चरम दुरुपयोग भएको छ ।
प्राधिकरणका युनियनहरुले भने गाडि फिर्ता गराउन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंलाई पटक पटक आग्रह गरिएको र आइतबार पनि फेरी यही विषयमा कुरा गर्न भेटने कार्यक्रम रहेको बताउँदै गाडि फिर्ता नभए पहिला जसरी नै आफूहरु प्रतिरोध उत्रने बताएका छन् ।
प्राधिकरणको काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका कार्यबहाक अध्यक्ष प्रमिला ढुंगानाले भनिन, हामीले पटक पटक गाडि फिर्ता गराउन उहाँ (कुलमान घिसिं)लाई आग्रह गर्यौं । तर उहाँले आफ्नो कुर्सी हल्लिने डरले होला फिर्ता गराउनु भएको छैन् ।
उनले विभागीय मन्त्री, राज्यमन्त्रीको नाताले एटा एउटासम्म गाडि प्रयोग गर्ने कुरामा चुप लाग्न सकिने भए पनि एउटै मन्त्रीले तीन चारवटासम्म गाडि दुरुपयोग गर्ने, त्यसमा पनि एपीले समेत प्राधिकरणको महंगो गाडि लगेर चढने कुरा सैह्य नहुने उनको भनाई छ । Loading...
तालिममा यसरी बेहोस हुने गरी कडा यातना दिए पछी म्यादी प्रहरी आन्दोलनमा उत्रिए!(हेर्नुहोस भिडियो)
पानीको हाहाकार हटाउन काठमाडौं उपत्यकाकामा ५० वटा ट्यांकी राखिने
वैशाख १३ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ५० सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी ट्यांकी निर्माण गर्ने भएको छ ।
मुसलमानले व्रत बस्ने बेलामा सरकारले निर्वाचन तोकिदियो
वैशाख–१३ । मधेसी मोर्चा र सरकारबीच चुनाव सार्ने सहमति भएसँगै बाँकेमा विरोध सुरु भएको छ । जेठ ३१ का ल...
संविधानको धारा निलम्बन गरी यसपालि बजेट असार ३० मा !
वैशाख १३ । स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा एमालेले नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउन नदिने भनेपछि आउने आर...
चालक-पैदलयात्रीमाथि ट्राफिकको निगरानी : पैदलयात्रीले जरिवाना तिर्नुपर्ने
काठमाडौं बैशाख १३ चालक र यात्रुको लापरबाहीले सवारी दुर्घटना बढेपछि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक महाशाख...
माओवादीमा आफ्नो हात जगन्नाथ
काठमाडौं, १३ वैशाख । पटक पटक परिवारवादको आरोप खेप्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेताहरु...